Par Taratra sur 27/03/2020
Mpandeha an-tongotra miisa 1140, mpitondra moto 550, mpitondra bisikileta 440, ary fiarakodia 204 no voasakan’ny mpitandro filaminana teny Ampangabe, RN7, omaly hatramin’ny 5 ora tolakandro. Toerana misy ny sakana ara-pahasalamana (barrage sanitaire) ahitana mpitandro filaminana sy mpiasan’ny fahasalamana.
Miandry ny valin-tenin’ny mpitondra fanjakana kaomorianina, ireo teratany kaomirianina maniry hody an-tanidrazana, hatry ny omaly. Manentana azy ireo ny masoivoho kaomorianina eto amintsika hanatona ny “service consulaire” mba hahafahan’izy ireo mahazo taratasy fahazoan-dalana vonjimaika avy amin’ny governemanta malagasy. Indrindra ho an’ireo vahiny manana “visa” tsy monina fa mandalo fotoana fohy eto amintsika.
Nanentana ny olona hamonjy fodiana ny mpitandro filaminana, teny amin’ny 67 ha Atsimo, omaly tolakandro, tokony ho tamin’ny 5 ora teo ho eo. Ireo olona tsy manana antony manokana tokony hivoahana ny trano no tena nentanina. Horakoraka sy siotsioka anefa no nasetrin’ny sasany izany.